Kooxda Manchester City ayaa diiday dalab 40 milyan ginni ah oo kaga yimid Paris Saint-Germain oo ku aadan Mario Balotelli ka dib markii uu tababare Roberto Mancini ku hanjabay inuu iscasilayo. Tababaraha PSG Carlo Ancelotti ayaa Balotelli ka dhigtay mid ka mid ah ciyaartoyda ugu sareysa ee diirada u saaran waxaana uu kalsooni ku qabay inuu weeraryahanka u soo jiido France. Lakiin dalabkaas aadka u weyn ayaa la diiday markii uu Mancini u sheegay madaxda City inuu isaga dhaqaaqi doono kooxda heysata Premier League hadii ninka kale ee reer Talyaani loo ogolaado inuu kooxda ka tago.(Daily Star)
Isfaham la’aanta ka dhaxeysa Mancini iyo madaxda kale ee kooxda ayaa keeneysa jahwareer kale oo ka socda Manchester City, ka dib markii tababaraha uu ku eedeeyay Brain Marwood oo ah agaasimaha Isboortiga inuu ugu wacan yahay dhaqdhaqaaq la’aanta ka jirta suuqa kala iibsiga ciyaartoyda. (The Guardian)
Ciyaaryahan Robin van Persie ayaa qarka u saaran inuu Arsenal u ciyaaro kulan saaxiibtinimo maalinta axada iyadoo wada xajoodkii Man United ay istaagtay. (Daily Mirror)
Liverpool ayaa ka fekereysa nolal ka danbeysa Daniel Agger, waxaana ay gabaad ugu jiraan daafaca kooxda Atletico Madrid Diego Godin. (Metro)
Juventus ayaa dalab 14 milyan ginni ay ku dalbatay ciyaaryahanka diirada u saaran Manchester City iyo Tottenham Fernando Llorente laga soo diiray. (talkSPORT)
Manchester City ayaa indhaha ku heysa inay la soo wareegto daafaca bidix ee South Korea Yun-Suk-Young. (talkSPORT)
Ciyaaryahan Victor Moses ayaa ku sii jeeda kooxda Chelsea isagoo heshiis 9 milyan ginni ah uga soo dhaqaaqaya Wigan ka dib markii gudoomiyaha Wigan Dave Whelan uu ugu danbeyn ogolaaday inuu baxo wadahadalo socda isbuucaan. (Daily Mirror)
Andre Villas-Boas ayaa u sheegay Luka Modric inuu madaxiisa ka saaro xaqiiqda ah in la iibin doono ilaa iyo inta koox kale ay miiska soo saareyso lacagta ay rabto Tottenham. Villas-Boas ayaa uga digay 26 jirkaan inuu diyaar u noqdo inuu aqbalo in laga yaabo inuu kooxda sii jooo, waxaana uu ugu baaqay inuu diyaar u noqdo sidaas. (Independent)
Brendan Rodgers ayaa ayaa la yaab ay ku noqotay lacagta ay saxaafada ku sheegeyso inuu ku qarashgareeyay suuqa kala iibsiga tan iyo intii uu kooxda yimid. Rodgers ayaa kula soo wareegay Allan ka dib markii ay bixiyeen 15ka milyan ginni ee lagu burburin karay qandaraaskiisa. Rodgers ayaana doonaya inuu sii wado ka soo adeegitaankiisa suuqa kala iibsiga waxaana uu xiiseynayaan Clint Dempsey iyo Nuri Sahin. (Daily Mail)
Queens Park Rangers ayaa fasax u siisay weeraryahankooda DJ Campbell inuu la hadlo kooxda Blackpool si uu dib ugu laabto Bloomfield Road. (The Times)
Joey Barton ayaa qarka u saaran inuu heshiis amaah ah oo hal xilli ciyaareed ah ugu biiro kooxda Blackpool. (Daily Mirror)
Sunderland ayaa qiimeyneysa xaalada Jerman Defoe ee kooxda Tottenham. (Daily Mail)
Tababaraha kooxda Manchester City Roberto Mancini ayaa sheegay inuu dalabyo ka yimid Italy iyo France oo ku aadan xiddiga reer Italy Maria Balotelli uu ka diiday. (Football Italia)
Kooxda AS Roma ayaa lagu soo waramayaa inay ku dalbatay 12 milyan euro daafaca kooxda San Paolo Rhodolfo ka dib markii ay iska fasaxeen Gabriel Heinze. (Corriere dello Sport)
Agaasimaha kooxda Juventus Giuseppe Marotta ayaa xaqiiyay in Antonio Conte uu sii ahaan doono macalinka kooxda, inkastoo laga mamnuucay ciyaaraha muddo 10 bilood ah. (Gazzetta dello Sport)
Kooxda Juventus oo weli suuqa ugu jirat inay soo xerogeliso weeraryahan weyn oo ay kula shirtagaan Champions League ayaa rajo fiican ka qabta inay soo xerogeliyaan Fernando Llorente kaasoo diiday inuu qandaraaska u cusbooneysiiyo kooxdiisa Athletic Bilabo. (Tuttosport)
Kooxda Ingariiska ee Chelsea ayaa lagu soo wamarayaa inay u calaamadeysatay daafaca kooxda Juventus Stephan Lichtsteiner mid ka mid ah ciyaaryahanada diirada u saaran xagaagan. (Football Italia)
Ciyaaryahanka laga nacay kooxda Real Madrid Drenthe ayaa ku sii wajahan Serie A waxaana xiiseyneysa kooxda haatan u soo kacday Serie A ee Torino. (Tuttosport)
Kooxda Real Madrid ayaa wadahadalo kula jirta weeraryahanka Argentina Gonzalo Higuain oo ku aadan heshiis cusub, iyagoo doonaya inuu saxiixo heshiis ku sii heynaya Santiago Bernabeu ilaa 2018. (AS)
Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay saxiixyadeeda muhimka ah sameyso ilaa iyo maalinta ugu danbeysa suuqa kala iibsiga ciyaartoyda oo ah maalinta 31ka August, waxana u qorsheysan inay maalintaas oo xerogeliyaan xiddiga Tottenham Luka Modric. (Marca)
Ciyaaryahanka reer Holland Joris Mathijsen ayaa in badan sii aheyd ciyaaryahan Malaga ah ka dib markii uu heshiis la gaaray kooxda dalkiisa ee Feyenoord. (Marca)